Matribhumi Khabar २३ जेष्ठ २०७८, आईतवार ११:१९ मा प्रकाशित
तिम्रा दुई छोरीहरु मात्र छन् ? अब त एउटा छोरा पाऊ, बुढेसकालको साथी चाहिन्छ नि ! “यो कुरा ति अंकलले भन्दै थिए जसको आफ्नै छोराहरुले उनलाई फोन समेत नगरेको महिना दिन भइसकेको थियो । किन सधैं छोरीहरुलाई एक बरदान नभएर एक बोझ मानिन्छ ? किन महिलाहरुबाट आफ्ना श्रीमानको बावुआमाको हेरचाहको अपेक्षा राखिन्छ ? तर त्यहि छोरी आफ्नो आमाबुवाको हेरचाह गर्न सक्षम हुन सक्छिन् भनेर पत्याउन समाजलाई गाहो पर्छ ? हामीले समाजमा धेरै छोराहरु देखेका छौं,जसले आफ्ना आमाबुवालाई अलपत्र छाडेका छन् । त्यस्तै कैयौं छोरीहरु पनि देखेका छौं, जसले आफ्ना आमाबुवाको आर्थिक र भावनात्मक हेरचाह गरिरहेका छन् । तर पनि हाम्रो समाजले अझै छोरीलाई भन्दा छोरालाई प्राथमिकता दिन छोडेको छैन ।